OS X na nke Linux: ọgụ ikpeazụ | Site na Linux
OS X na Linux: ọgụ ikpeazụ
Ugboko92 | | GNU / Linux, Ndị ọzọ
Anọ m na-agbachitere ngwanrọ n'efu, ọbụlagodi ọnwa 6 ebe m nwekwara oge Gnu troll, oge nke m katọrọ ihe niile bịara de Windows na karia nke uku, ihe ahu nke biara Apple. Ọhụụ m na-agbanwe obere obere, ikekwe n'ihi na anaghịzi m ekwenye na ndụ na pc dị oke mkpa iji nyere m nsogbu banyere ikikere na ahịhịa dị iche iche, yabụ ugbu a, a raara m onwe m nye iji sistemụ arụmọrụ niile na-arụ ọrụ n'igwe m.
Site na ihe niile ekwuru n’elu, echiche nke ịnwale ịwụnye OS X Snow agụ owuru, na laptọọpụ m na-anwụ kwa ụbọchị, nke m nwetara mgbe otu izu nke mgba na mgba na ntinye na mmelite.
Ozugbo echichi e mere, Agwara m enyi m Gaara banyere ime otu isiokwu iji tụnyere arụmọrụ nke osx y Linux jiri AMD Turionx2 PC na eserese agagharị Radeon 4650.
Mgbe ị bịarutere oS X, ihe mbụ ị hụrụ bụ ezigbo desktọọpụ, ụzọ mkpirisi keyboard na ụfọdụ mmemme arụnyere, bara ezigbo uru dị ka Time MachineMa gịnị banyere arụmọrụ nke PC eserese ibe?
Naanị arụmọrụ dị ala, mana ọ bụghị nke na-eleghara anya, igwe ahụ na-atụ karịa nhazi karịa eserese, belụsọ egwuregwu, mana ihe kacha awụ akpata oyi n'ahụ bụ ịghọta na enwere naanị 4 ma ọ bụ 5 kaadị, nke na-enye ohere iji eserese eserese na-ekiri ihe nkiri, yabụ Ọ bụrụ nwere ihe nhazi dị ka Intel i3 ma ọ bụ obere, atụla anya na ị ga-ahụ 1080p nke ọma, ma ọ bụ na ị gaghị atụ anya filasi dị elu.
N'ime ihe nchọgharị niile m nwara, Firefox, safari, Google Chrome y Opera Na-esote, naanị otu onye na-eji gpu osooso, bụ onye m hụrụ n'anya opera (ịdị iche)ya mere enweghị m nhọrọ ọzọ karịa iji nke a.
Na ngalaba egwuregwu, ọ tụrụ m n'anya ịhụ ụfọdụ ọdụ ụgbọ mmiri dịka Pro Evolution ma ọ bụ Fifa, na mgbakwunye na ịhụ na enwere obodo nke raara onwe ya nye maka ịba egwuregwu ndị a. (Amaghị m otú ha ga-esi mee ya). Performancerụ ọrụ na egwuregwu adịghị mma ma ọ bụrụ na ịnweghị nnukwu eserese ma ọ bụ cpu, mana ha ka na-egwu egwu.
Onu ogugu nke ngwa di m ka obere, ma otutu nke nwere mmasi, aghaghi m izuta ha, mana ee, ole na ole enwere, bara uru n'ezie, mgbe ufodu, o nweghi uru inwe ndi egwu 5, ma oburu na onweghi onye zutere atụmanya. Ikekwe, ebe a bụ isi uru nke oS X banyere Linux, inwe ngwa ahia dika MS Office, Mebere DJ, Adobe ma ọ bụ Steam suite.
The kwụsie ike bụ nnọọ ihe dị ukwuu na ya n'otu na a na-na-na ọdịdị na nkwanye ùgwù maka anya na obi na-adị nke n'elu ikpo okwu site niile ngwa, mee ka ọ dị mma Windows ọzọ. (Ugbu a ọ bụrụ na ị kpebie ma ịchọrọ ịnwale ya na Mac ma ọ bụ a Mbanye anataghị ikike nke otu mkpụrụ ego maka euro 300 ma ọ bụ 400 obere.)
N'ikpeazụ, achọpụtara m na nke m CPU heats elu ihe na-erughị na Windows o Linux, Amaghị m ihe kpatara ya….
Ihe a niile kwuru, ana m akatọ n'ihu ọha nsogbu nke ịhazi ya oS X, nkatọ nhọrọ ole na ole dị na nchịkọta nhọrọ, ebe ebe Linux merie site na okpuru ala. Ọ bụrụ na e nwere ihe na-amasị anyị Ndị Linux, bụ inwe ike iji kọmputa anyị mee ihe ọ bụla anyị chọrọ: D.
na ATI en LinuxM na-ekwughachi, ha anaghị arụ ọrụ na Laptọọpụ na ndị ọkwọ ụgbọala anaghị akwụ ụgwọ, taa oke oke ọkụ ọ na-akpata dị egwu. Na Linux anyị nwere vidiyo osooso vidiyo maka mmadụ niile ATI / AMD ihe dị na oS X enwere ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ m anaghị arụ ọrụ.
Ọnụ oS X y Linux Ha bụ otu, n'eziokwu, enwere m ike ịnwale ọtụtụ iwu ma ha rụọ ọrụ.
Linux ka odi ka ezigbo nyiwe maka mmepe, otu uzo esi chikota oS X na ị chọtala, e nwụnye ndị obi ụtọ Xcode, Enweghị m ike ịchọta ụzọ ọzọ iji mee ya na enweghị ya.
Ọ bụrụ na ịchọghị ngwa azụmahịa, ekwenyere m nke ahụ Linux osobo niile choro ma oburu na ichoro ichofu Windows ma nwee pcsix kwụsiri ike, mana ịhapụ ịhapụ ọtụtụ ngwa ị jiri, oS X obu ihe gi.
Na njedebe nke ya, m ka na-eche na ọ baghị uru imechi otu sistemụ arụmọrụ, m ka bụ mmụọ nweere onwe ya na ọ nweghị ihe na-atọ ụtọ karịa ịmara otu esi eji ihe niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » OS X na Linux: ọgụ ikpeazụ
Ma ị lara ezumike nká?
Adị m ka michael schumacher, oge ụfọdụ ana m apụta xD
Nwanne dimkpa, i gosiputara, ekelee gi, blog gi agbaghara, o bu na ichoghi ime ihe ohuru?
Echere m na eruola m ebe ịtụle Windows na OS X na Linux yiri m enweghị isi, n'ezie.
oS X OS maka onye ọrụ dị njikere ịkwụ ụgwọ maka akụrụngwa na ihe niile na-arụ ọrụ na nke mbụ. Na otu aka ihe niile ga-adị mma, ọ ga-arụ ọrụ nke ọma, mana na nke ọzọ ida 98% (ma ọ bụ karịa) nke njikwa gị sistemụ. Ọ dị mma maka ndị nrụpụta ma ọ bụ ndị ọrụ na-arụ ọrụ na Multimedia na ndị nwekwara Ngwa Gadget zuru ezu (iPhone, iPad, iMac ma ọ bụ MacBook).
Windows OS maka onye ọrụ dị njikere ịkwụ ụgwọ dị ukwuu maka Software na ihe niile na-arụ ọrụ mgbe etinyechara ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọala. Ọ ka mara mma mana ọ bụ opekata mpe "enwere ike ịnweta ma jiri ya", na mgbakwunye, ida 99% (ma ọ bụ 100%) ga - efunahụ sistemu. Ezigbo maka ndị Gammers.
GNU / Linux OS maka onye ọrụ dị njikere ịkwụ ụgwọ (ma eleghị anya) iji kwado ngwaike na ọrụ ha. O nwere ike ịbụ ihe mara mma dịka onye ọrụ chọrọ, ọ bụrụhaala na ha tinye ihe okike na iche n'echiche na desktọọpụ ma ọ bụ njikwa windo ha na-eji. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma na 90% nke kọmputa, ma ị nwere njikwa 99% (ma ọ bụ 100%) na sistemụ gị. Odiiri ndi oru choro imuta ihe, ndi mmemme ma obu ndi n’adighi njikere inye aka nke ndi Redmond na Cupertino.
More ma ọ bụ obere n'ebe ahụ m na-ahụ ihe.
Nwoke, ahuru m na abughi m so na ihe ndi a turu gi bore
+1 Ekwere m gị.
Ikwu okwu a bu impeccable. Ọ dị ezigbo mma. Cond kwadoro ihe niile anyị gụrụ na ịntanetị n'ime afọ ise gara aga !!!
Enwere ụfọdụ isi okwu ndị ọzọ anaghị apụta n'ihi na ha abụghị "mpụga" ma ọ bụ "ebumnobi" ... mana ka anyị hụ ma m tinye obere ihe egwu iji gosi ha:
Os X: OS maka onye na-eme ihe ike, na-ebuli onwe ya elu ma jiri ikike ịzụta ihe. Azụmahịa na uche ụwa na nghọta maka imewe na okike. Kwere na iwu ahịa dị ka okpukperechi. Gorillas, neoliberalists na "fashionable na avant-garde" ndị mmadụ na-ahọrọ usoro a
Windows: wantchọrọ ijikwa mp3s fashionable wee budata ha n'efu? You chọrọ ịgwa ndị enyi gị site na netwọkụ mmekọrịta otu ndụ gị si dịkarịsịrị njọ? You chọrọ ibudata ọtụtụ ihe nkiri Hollywood ruo mgbe anya gị ga-edo anya? Wantchọrọ igwu egwu ma kpọọ n'ihi na ndị mụrụ gị na ịhụnanya adịghị. Do chọrọ ịgba ọsọ SME ma ọ bụ ụlọ ọrụ ma ị chọrọ sọftụwia ọkachamara? Do chọrọ inwe mmetụta "nchekwa" na ike nke antivirus. Họrọ usoro a.
GNU / Linux: Ọ bụrụ na ihe mere na ndụ gị nke mere ka ị ghara ịga nke ọma na ụmụ akwụkwọ ibe gị kemgbe ị bụ nwata na ụmụ agbọghọ anaghị ele gị anya ... ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịnwe bọọlụ iji kwupụta onwe gị dị ka ịchọrọ na ọtụtụ oge ha chịrị gị ... gbaghara site na Linux, nweta ọgụgụ isi ma mara karịa enwe ndị ọzọ niile na-arụkwa pc mana ha anaghị aghọta ihe ọ bụla! Site na ebe a, n’ọdịnihu anyị ga-achị ụwa. Pụrụ iche maka ọrụ mmekọrịta mmadụ na-ejedebe ebe ọ bụla na ndị NGO na-achọ ịsacha mmehie ha. Obi dị gị mma karịa obere mmadụ ị bụ: A Linux.
ọchị ¿hahahaha !!!! kele ndị mmadụ.
Nke atọ dijo
okwu a anaghị aga nke ọma na aha nke post
Zaghachi Nke Atọ
Ọ nwere ike ịbụ naanị otu?
Ekwuru m ya n'okpuru, Enweghị m afọ ojuju n'ịmara otu esi eji naanị otu, ị maghị ebe ndụ ga - ewe gị, ọbụlagodi ọrụ gị :)
Mgbe ahụ emezuola m, m nwere ike iji hahahaha niile.
Ọfọn, BSD ma e wezụga maka apụl nke ọma n'ezie ...
Ma, ị chere ihu abụọ na usoro ma ọ bụ na? Nye meriri n'agha nke ikpeazu?
Aga m agwa gị eziokwu. Maka aha m tụrụ anya ntinye ka njọ. Echere m na vidiyo dị ka nke ahụ na YouTube, ebe Tux na-alụ ọgụ megide akara Windows. Ma ọ bụ nke ọzọ ebe Tux ninja chere ihu na robot.
Hahaha Enweghị m ike ịme vidiyo, na ọtụtụ mmadụ na-ekwu na ọ bụghị suar flash xD…, ahahahaa. Ekwughị m onye bụ onye mmeri, n'ebe ahụ, mana enwere m ya doro anya :).
On Mac e nwere ngwa na-akpọ iMovie bụrụ na ị maghị
Mhh amaghi m, m ga-ahụ ihe ga-eme.
Eziokwu bụ na maka ọnụahịa MAC ọ dị ka snob karịa ihe ọ bụla. Ma onye ọ bụla chọrọ imefu ya bụ ikike ya n'ezie, n'ihi na ọ bụ usoro dị mma. Ndị na-adịghị, oru elementrị mara ezigbo mma, na-eweta ezigbo streamlined ma ngwa ngwa na ìhè interface na-eji na-adịchaghị ike kọmputa ordenadores
Dị nnọọ iche. Enweghị ihe atụ ọ bụla na-adịbeghị anya. Ọ ga-amasị m ịhụ ntụnyere na mmepe nke GNU / Linux ugbu a, ndị ọkwọ ụgbọala ya, gburugburu eserese wdg.
Bịanụ mana were ọnụ ahịa mac, ọ bụrụ na anyị atụnyere mac megide pc, ọ bụ ngwaike ma ọ bụrụ na ọ bụ sistemụ arụmọrụ, ka anyị kwuo eziokwu, iji sistemu apụl abụghị ụzọ ziri ezi, ị gaghị enwe nkwado yana n'ezie karịa otu oge ị ga - enwe nsogbu dịka nke ị nwere ịwụnye ya na nso nso a. (ma ị na-akwụ ụgwọ ya). Usoro nke ọ bụla nwere uru na ọghọm ya, usoro mac anaghị anabata ya n'ụzọ iwu, ana m eleghara windo anya iji wụnye ya na ngwaike ngwaike (ọ bụ ezie na ọ nwere ike) ma ọ bụrụ na microsoft na-enye nke a dị ka nkwado, yana Linux ọ dịkarịa ala enwere nsụgharị ndị a kara maka mac . Usoro mac dị ezigbo ọcha, mana ị ga-akwụ ụgwọ maka ngwaike na ngwanrọ (ị nwere ike ịchọta mac na-emeghe ma ọ bụ mkpokọta, ọ dị m ka ị chọghị nke ahụ.) Agbaghara nkọwa ndị bụ isi nke ị na-akpọghị maka ya.
Ọfọn, ị ga-ahụ ya nke ọma, enweghị m mmasị na nkwado apụl, ma ọ bụ na windo na na Linux m nwere ya mana m na-akwụ ụgwọ redhat ma ọ bụ ihe yiri ya. Ihe doro anya bụ na ị nwere ike ịrịgo pc dị ka mac, maka euro 400 ma ọ bụ 500 dị obere ma ọ bụrụ na ịmara otu esi achọ, ọ bụghịkwa ihe isi ike.
Echere m na ọdụm ọdụm na-eri euro 20 ...
The Snow agụ owuru album na-efu m € 29 na ojo, melite, ị gha inwe agụ owuru maka hel, ma ọ bụrụ na ọ bụghị na album ahụ abaghị uru.
Cheta na ị gaghị akwụ ụgwọ xD, n'eziokwu ma ọ bụrụ na ị wụnye agụ owuru purute, ị maghị, n'ihi na ọ dịghị ajụ maka usoro ma ọ bụ ihe ọ bụla.
Ọ dị mma, mana na ọ bụ € 29 ma ọ bụrụ na ha anọghị n'ụlọ akụ.
N'ezie, nkọwa ahụ nke inwe agụ owuru adịghị mkpa, emere m nkwalite ahụ sitere na Tiger yana oge m weghachitere naanị m chọrọ DVD melite, ọ naghị eme nyocha ọ bụla, ee, ị tufuru ngwugwu ngwa iLife niile.
Nrụ ọrụ / ọnụego dị ka aghụghọ nye m, na akụkụ eserese ahụrụ m desktọọpụ KDE mara mma karị, na-akwụkwa $ 10 maka ngwa enwere ike iji edemede. Site n'ụzọ na-akwụ ụgwọ maka mmemme na mgbe ahụ maka mmelite ha na ihe niile echekwara, enwere m ike itinye ọla edo m. Mgbe ahụ ọ na - agwa gị na kọmputa gị enweghị ike ịgba ọsọ OS ọhụrụ yana mgbe ị hụrụ otu agadi ahụ nwere mmelite atọ.
Mmadu na uwa niile na akwu ugwo, ahughi m nsogbu ahu, ekwuola m na agaghi m azuta mac, inwe ike igba ya na pc m, ya mere oburu na ha agaghi aghọgbu m xD.
Ihe niile na-akwụ ụgwọ? Nke a bụ onye ikwu sooooo ... akwụbeghị m penny iji Linux mint. Enweghi m ugwo diski ike maka diski 140gb nke m weputara na laptọọpụ mebiri emebi ma ugbu a, ana m eji diski xD wepụ ...
Nwere ike iji ihu ọma ma ọ bụ ihe ọjọọ jụọ ihu ọma ma ọ bụ ihe ọjọọ ndị ahụ e kwuru na mbụ "karma" (murphy….) Mana ọ dị mma.
Mana na KDE kedu ka esi etinye menu nke ngwa dị ka OSX na ịdị n'otu?
Ọ dị mkpa ịnwe ohere ịnweta ohere ma jikwaa menus niile nkasi obi
N'aka nke ọzọ emepe foto adịghị njọ, mana ọ ga-enwe ike ịmepụta isiokwu ọba akwụkwọ (dị ka a ga - asị na ị na - aga site na mpempe akwụkwọ / foto) ma ọ bụ mmemme dị mma na ụdị Garageband (rosegarden bụ aesthetically site n'afọ nke ube) ị ga-enwerịrị njikọ na nhazi nke Jackd, wee pịa + jackd n'ihi na ha na-alụ ọgụ megide ibe ha ka ọ dị ezigbo mma OSX
Ndeewonu !! Ihe ikpeazụ ndị a na-adị mma. Oge ọ bụla ọ masịrị m blog a.
Daalụ 😀 😀
Ọfọn maka echiche gị ... ma bia, na-ahapụghị ihe bụ echiche nke onwe, amaara m na ọtụtụ ndị kwenyere na ọ bụ ojoro, na eziokwu bụ na ọnụ ahịa dị oke elu, mana dịka ọmụmaatụ laptọọpụ Apple .. . batrị ahụ na-adịte aka Ha dị ezigbo ọkụ, ha anaghị ekpo ọkụ, trackpad bụ ọ joyụ na ihuenyo ahụ karịrị nke ahụ, usoro a masịrị m, mana n'ezie, ọ na-enye gị nnukwu nnwere onwe, ebe ahụ onye ọ bụla onye ji ihe ha choro. Ọ bụ ezie na sistemụ kachasị amasị m bụ Linux, enweghị m ike zoo na laptọọpụ m nwere ndụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke nkeji 40 ma ọ nwere nsogbu ngwaike ngwaike ọbụlagodi Windows, yabụ € 1000 maka ikuku macbook nwere ike ịba uru (laptọọpụ m efu 550).
Ọ ga-amasị m ịnwale mac-osx, m ga-agba mbọ ịbụ switcher, naanị ihe gbochiri m bụ na pc m, nke nne nwere "nwụrụ", mana m na-ewu ọzọ.
O buru na otu aka achoro enyemaka obula, juo :), abia m ebe a ka m nyere aka n’ihe obula o gha eme, ka onye obula ghara izu otu izu anwa dika m ehehe.
Ezigbo isiokwu! M ga-arapara n’ikpe ikpeazụ gị na ikwu Elav.
Ahụrụ m OS dị ka ngwaọrụ. Onye obula ga-eji nke kacha dabaa na ihe ha choro.
«Mmegharị maka mkpa anyị» .. na nke ịmegharị otu maka mkpa maka nnwere onwe na mpaghara ọ bụla (yana nke mebere) nke ọha mmadụ ma ọ bụ ụwa, huh, haha ​​.. M na-ekwu na ị kwesịrị.
Echere m na Chromium / Chrome na-eji GPU Acceleration site na nsụgharị 11, anyị na-aga nkwụsi ike 17, yana maka 19 na mmepe. Have ga-ede na ihe: ọkọlọtọ taabụ ma mee ka kwekọrọ.
Agbalịrị m, mana mgbe m na-eme ule osooso, ọ naghị arụ ọrụ, na safari M na-elekwa etu esi eme ya, mana ahụghị m ụzọ.
Ejiri m Mac ụbọchị ole na ole na ọrụ ikpeazụ m nwere, ọ bụrụ na m na-echekwa ego iji zụta otu, ma site na ngebichi ndị nwere CPU rapaara (ha niile gwara ha) ma ọ bụ ikuku macboc.
Ahụmahụ Mac masịrị m.
Mweh, A bụ m otu n’ime ndị ahụ na-ere ahịa ratụ ratụ na-anara ihe ha nwetara wee napụta ya ... Ma Linux arụrụla m ezigbo ọrụ maka nke a. N'ezie, nwa oge gara aga, enwetara m onwe m agadi ochie Mac na-adịghị ahụkebe n'ụlọ enyi m, yana laptọọpụ 2005, ọ gbanyeghị ... nke geeks na klaasị niile) na mgbe ahụ amalitere m ịtụfu ya ... enweghị m ike ịnweta otu nke na-arụrụ m ọrụ 100% mana ọ bụrụ na ha megharịa m anya ọbụlagodi na ọ dị na 92% nke ikike ya (Debian kacha mma maka nke a, ọ na-akwado ihe niile) ...
Linux nke DamnSmall
Kpamkpam kwenyere, ọbụlagodi na m dabere na nke ahụ, ọ bụghị ihe niile nwere ike ịbụ 10Gb nke RAM na i7, yana njedebe dị ala anyị bi na mbara ụwa xD.
..n'agha, anyi nile nwere ikike iga ulo mkporo, nsogbu adighi. LOL !!
Maka ụkpụrụ ọma ... maka mmepe nke nkwukọrịta (ọ bụghị n'ihi na ị nwere ndụ gị ma ọ bụ na ọ bụghị na pc), ejila ihe na-akpasu iwe ọ bụrụgodi na ọ mara mma. O nweghi ihe jikọrọ ya na ịbụ GNU troll ma ọ bụ arụmọrụ sistemụ arụmọrụ. SL bụ sọftụwia mmekọrịta mmadụ na ibe ya. ọbụghị ngwá ọrụ sitere na ahịa nkeonwe. Bịanụ, ị maraworị ihe a niile. Nwee ụkpụrụ !! enyere ụwa na-eche mara mma !!
rodolfo na-arụ ụka dijo
Mac nwere ike ịdị ngwa ngwa (n'anya gba ọtọ) mana ha amachaghị, ọ dị mfe iji bulie sistemụ arụmọrụ na ngwaike dịka mac (ebe ha kpebiri ụdị ngwaike iji wepu yana nhazi bụ pro dị ka con), kama enwere PC dị iche iche, ọ ga-amasị m inwe ike ịkwalite ntinye linux dị ka nke a (nke ga-ekwe omume mana ọ na-ewe ogologo oge, naanị distro nke na-eme nke ahụ bụ gentoo). Ọ ga-amasị m ịchọpụta ma ọ bido mbido na arụmọrụ ọsọ ọsọ. Site n'inwe kernel kachasị maka ụfọdụ ngwaike, yana mkpokọta mmemme maka cpu. Ọ bụrụ na enwere onye ọrụ gentoo, gwa m kenye ahụmịhe ahụ.
Zaghachi rodolfo arguello
Nwanne m nwoke ga-agbanwe site na Ubuntu gaa MacOSX ogologo oge gara aga, ọ dị nwute mgbe ọ gbachara mmiri ahụ, ọ nọgidere na-ebu ibu ma ọ gafere nkwụsị ahụ ma ya onwe ya ma m amaghị otu esi aga n'ihu, eziokwu bụ na anyị dịkwa umengwụ.
Anọ m na-eche mgbe niile na ọ gaara abụ nwanne m Ubuntero ma ọ bụrụ na MacOSX gbara ọsọ: P.
opekata mpe ọnwa isii ebe m nwetakwara oge Gnu troll, oge nke m katọrọ ihe niile sitere na Windows na karịa karịa, nke sitere na Apple.
Ihe n’enye m GNU. Ha na-ata ụta banyere àgwà ọ bụla na-adịghị mma ọbụlagodi mgbe ha enweghị ihe ọ bụla jikọrọ ya na ya.
Beingbụ onye nkatọ na / ma ọ bụ onye iro na-enweghị isi nke Microsoft ma ọ bụ Apple ma ọ bụ onye ọ bụla, nwere obere ihe gbasara GNU na Software efu.
Maka GNU, FSF na Free Software ihe dị mkpa bụ na ngwanrọ ahụ bụ Free ma ọ bụrụ na ọ bụ (*) ọbụlagodi na ọ sitere na Microsoft ọ ga-anabata nke ọma. Ma ọ bụrụ na ọ bụghị, ma ọ bụ lemon ube nke arụmọrụ ma ọ bụ site na ntọala nke idi ocha ụmụ agbọghọ nuns, ọ dịghị.
(*) Aghọtakwara na sọftụwia ahụ ekwesịghị inwe nzube nke ịchịkwa, nledo, mmegbu, imebi, "igbochi" onye ọrụ.
Nke a na-emegide usoro ndị ọzọ na pro Linux militancy bụ nke LinuxTroll, TuxTrolls, wdg; na redundancies wezuga onwe ya, ihe mere o ji dị bụ ibulite ihe niile bụ penguuin na karịa karịa ịwakpo ihe na-abụghị penguuin ahụ, ọkachasị n'ọhịa nke ike ya. Ndị a nwekwara n'ọtụtụ ọnọdụ nwere njirisi na ụkpụrụ nhọrọ dabere na oge ahụ, mana nke ahụ bụ ihe ọzọ.
Echere m na ọ dịghị onye ebe a hụtụrụla GNU Troll. Anaghị m echeta ịhụ ihe ọ bụla.
E nwere ihe ọzọ a na-apụghị ịgọnahụ, Mac UI kụrụ onye ọ bụla ha tinyere ya na ihu, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị hazie linux ma ọ bụ windo gị ...
Emechaghị m ịgụ akwụkwọ ahụ n'ihi na n'eziokwu niile, ọ mara mma>: (
Tụlee arụmọrụ nke Mac, onye ụlọ ọrụ ya, dị ka shitty dị ka iwu Orwellian na ego ya, bụ onye ndu na mmepe na ihe ọhụrụ nke ngwaahịa teknụzụ agbakwunyere, yana igwe na-arụ ọrụ na GNU / distro Linux bụ nzuzu. Apple na-anọchi anya maka ijikọ ngwanrọ / ngwaike ọ bụ ezie na mgbe ọ bụla ha na-ewehie ụzọ (dị ka ụdị Mac na afọ 2010/2011 onye arụmọrụ ya hapụrụ ọtụtụ ihe ọchọrọ) yana GNU / Linux kwụpụtara maka itolite site na mmali na oke. ya mere nke bụ oge nke oge iji jide, mụ onwe m na-eji HP Pavilion 4287cl nke Intel na ATi ngwakọ VGA na ndị ọkwọ ụgbọala na-emeghe ma eziokwu ahụ bụ na ịmara etu esi emezi kernel na bọọdụ ahụ yana iji PowerTop 2 okwu banyere kpo oku ọ bụ ngụkọta akụkọ ifo.
Banyere sistemụ arụmọrụ: MacOS SUCKS. Ejirila m SnowLeopard na Lion (10.6 na 10.7) ruo ọtụtụ oge ugbu a ma ha bụ claustrophobic na enweghị ike ịnagide, ọ gaghị ekwe omume maka mmadụ iji nnwere onwe na mgbanwe nke GNU / Linux iji.
Ejirila m Macs ọtụtụ, ma 23 ″ iMac na MacBook Pro, ma gafee mputa mpụga (na ụfọdụ ụfọdụ ngwaike ngwaike) igodo ahụ enweghị ike ịkọwa ma sọftụwia ahụ ka njọ ...
Ọ bụrụ na m ga-eji sọftụwia pụrụ iche maka ọrụ m, dịka ọmụmaatụ Autodesk ma ọ bụ ihe yiri nke a maka ọdịyo / vidiyo ọkachamara na-edezi nhọrọ mbụ m bụ Windows, nke dịkwa njọ ma oge 20 dị ọnụ ala karịa ọnụahịa ndị isi ha na-akwụ gị maka Mac ma ị nwere ike jiri otu ihe ngwanrọ na ngwaike di ike karie.
Site n'ụzọ, ị maara na Mac na-ere "sava" ndị dị oke ọnụ, mana sava nke ha na-agba ọsọ na HP's AIX na Debian GNU / Linux?
Mac eme nzuzu, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịnwale ya Mammoth etinyegoro VMware oyiyi ibudata.
Agaghị m aza gị gbasara ịnyịnya ibu n'ihi na ọ dịkarịa ala ị nwere ike iji ọkọlọtọ Spanish, maka nke ọzọ, na ị naghị amasị macs apụtaghị na ha bụ ndị na-adịghị mma, jụọ ndị na-agba ịnyịnya na ị ga-ahụ ihe ọ ga-agwa gị. Ekwenyesiri m ike na macbooks, na ikuku, yana lenovo pc's bụ naanị ihe bara uru ịzụta. Osx bụ sistemụ nke m hụrụ n'anya, dịka m hụrụ Windows 8 n'anya n'akụkụ na chakra m na kde, bụ ihe dị mma maka ịghara ịbụ ndị Taliban dị ka ụfọdụ.
Mac m na-anakwere na ọ dị ukwuu na ihe niile fart, ma Windows 8 kpọrọ ị na-amasị na-eitationomi nke screeching foto ngwakọ n'etiti ịdị n'otu na Kde?, Enyi kpachara anya na-eyi iko n'ihi na win8 ihuenyo na-ahapụ gị kpuo ìsì XD.
Eziokwu bụ na enweghị m ihe ọ bụla megide mac, ọ bụ sistemụ arụmọrụ dị oke mma ma dịkwa oke ọnụ ma ọ bụrụ na ọ dịbeghị ihe m mere na ndụ m bụ ịkwụ ụgwọ maka ngwanrọ ahụ.
Banyere windo ị nwere nhọrọ 2, juggle iji nye ya ọrụ nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 5 awa, na nyocha na disinfecting, defragmenting ma hichaa registries na regcleaner ma ọ bụ kwe ka usoro ahụ dị arọ ma jupụta na nje (WinXP Ahụmahụ, WINVISTA NA WIN7) . Enwere ike ịbanye Windows ma ị gaghị akwụ ụgwọ maka otu.
Eziokwu bụ na m na-ahọrọ Debian na Linuxmint m ọ dịghị ihe dị mma karịa nke ahụ, mana ọ na-ekpuchi mkpa m yana gbasara egwuregwu n'ihi na ọ na-amasị m egwuregwu ndị dị mfe dịka Lugaru, oghere na Megaglest karịa nke kachasị nke ndị m nwere, yana mwakpo ahụ cube.
m na gammer na Linux. Banyere arụmọrụ, onye nhazi m abụghị nnukwu nsogbu, ọ bụ isi 2 duo na 2gb nke ebule na sistemụ m na-amalite site na 100 mb nke ebule na ihe kachasị ya na-eri bụ 520 mb, achọghị m karịa.
Ma dị ka elav kwuru, onye ọ bụla na-eji ihe suut ha mkpa.
Ọfọn, m na-amasị ndị nta n'ámá karịa na mbụ interface, gịnị ka ị chọrọ ka m gwa gị, ihe atụ m na-amasị ha karịa gnome Shell, ma na agbanyeghị maka agba ụtọ.
Anyị amaworị ya ma anyị na-asọpụrụ okpukpe gị. enyi, ekene.
hahahaha agha a nke sistemụ arụmọrụ. ha dị ka agha okpukpe. Ha kwesịrị ịme njikọ nke ikpe ziri ezi, ebe mac a, Linux na windo iji nweta nkwekọrịta.
Anyị maqueros bụ njikọ nke onyinyo ahaha si batman xd
Agụrụ m na nkwupụta ndị dị n'elu na ha na-ahụ ntụnyere nke usoro ọrụ atọ a enweghị isi. Enweghị uche? , dị ka m si kwuo, ntụnyere a (na arụmụka gụnyere) nke kachasị dị ntakịrị bụ ihe nzuzu. Na kọmputa desktọọpụ anyị nwere naanị ike atọ dị na OS (Linux nwere ihe pụrụ iche nke ịnwe nkesa dị iche iche na ihu dị iche iche mana otu kernel na isi OS, dịka "okpu uhie" ma ọ bụ "debian", nke ikpeazụ ejiri "ubuntu") ya na Oge oru gi nile iji meputa oke koodu ahu (nke ruru otutu nde dollar, adighi kee ya n'otu ubochi ma obu otu afọ). Arụmụka ahụ meghere, mana m lebara anya (achikota) bụ na gnu / linux maara etu esi eji akụrụngwa arụ ọrụ nke ukwuu, nke na - eme ka ite ochie, dịka ọmụmaatụ, Ubuntu 10.10, na - agba ọsọ karịa nke ya, Windows 7 , ma ọ bụ ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịnwere ike itinye OS X, Linux ga-aga n'ihu na-enweta na arụmọrụ. O doro anya na enwere àjà ma ọ bụrụ na anyị nwere gnu / linux, mana maka nke ahụ anyị nwere nnwere onwe ịnwe karịa otu. Yabụ, agbanyeghị, m ga-enwerịrị Windows iji mepụta dọkụmentị okwu, ma ọ bụ jiri egwuregwu Windows directX na-egwu egwuregwu vidio. Ya mere, arụmụka na ntụle nke ihe atọ ndị a ka na-enweghị isi? Ọ dị mma, yabụ ka anyị na-azụ MacBook na OS X n’ihi na ha “dị mma” (okwu njakịrị). Ezigbo isiokwu.
Linux Deepin: nkesa ọzọ dabeere na Ubuntu na Gnome Shell
Midori dị 0.4.4